आत्मिकि लोडसेडिङ र भ्रष्टचारी चर्च | Nepali Christians
आत्मिकि लोडसेडिङ र भ्रष्टचारी चर्च
March 24, 2017 9:24 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
नेपालको ईतिहासमा धेरै बर्षदेखि लोडसेडिङ हुँदै आएको थिया जसको कारण कुनै पनि काम सहजरू पले हुन सकेको थिएन। नेपालमा लोडसेडिङको साँचो समस्या थिएन भनेर हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा भएको छ। प्रशस्त बिजुली भए पनि नेपाल बिधुत प्राधीकरनमा केही कर्मचारीहरू ले बिजुली चोरी र कालो बजारी गरेर नेपाली जन्तालाई ठगेको कुरा आज हामी माज खुलासा भएको छ। कुलमान घिसिङले बिधुत प्राधीकरणमा भएको घुष खुलासा गरेर नेपालको लोडसेडिङको समस्या घटाइ दिएका छन्, उनी प्रति सारा नेपाली जन्ता आभारी छन्। संसारमा घुष लिएर भ्रष्टचार गर्नेहरू छन् भने सत्यतालाई पछयाउने मानिसहरू पनि छन् भनी कुलमान एक उदाहरण हुन्।
जसरी घुषखोरीहरूले लोडसेडिङ ल्याएका छन त्यसैगरी ख्रीष्टियान जगतमा पनि घुस, ठगी र आत्मिकि बचनको कालो बजारीकरन भइरहेको छ। येशू , मोशा, अगमवक्ताहरू र विश्वाशको पिताहरूको समयदेखि प्राणघातका बाढीझै आत्मिकि लोडसेडिङले र भ्रष्टचारले एक जघन्य अँध्यारोपन छाएको छ।
कम्पनी चर्च, यहुदी सभाघर र सत्यको लोडसेडिङ
कुनै प्रकारका ख्रीष्टियान सम्प्रादयका लागि कार्यरत धेरै चर्चहरू सरकारमा दर्ता भएको कम्पनी सरह भएको छन्। गरीब देशहरूमा अमेरिकी र यरोपेली चर्चका सहयोगले पनि चलेका छन्। परमेश्वरको साँचो बचन प्रचार भन्दा सम्प्रादयको शिक्षाहरू फैलाउन व्यस्त छन्। येशू को समयमा यहुदी सभाघरहरू शैतान र डाँकुहरू को अड्डा भएको थियो। फरिसी, सदुकी, जियोलट्स आदी सम्प्रदायहरू सभाघरहरूमा परमेश्वरको सत्यतालाई दबाएर मानिसको परम्पराहरू जन्तामाथी लदाएका थिए। येशू जहिले यी सभाघरहरू भित्र पसी साँचो बचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र मानिसहरू लाई जीवनको ज्योती प्रदान गर्दैरहनुभयो भने उता कठोर फरिसीहरू अन्धकार मृत्युको लोडसेडङ ल्याउनमा व्यस्त रहेका बाइबलबाट देख्न सकिन्छ। यरू शालेमको मन्दिरसमेत भ्रष्टचार मानिसहरू ले भरीएकोले येशू रीसले चुर भई लाठी चार्च गर्नुभयो।
चर्चहरू गैर सरकारी संस्था र राजनितिको प्रतिनिधि समेत भएर परमेश्वरको बचनको कालो बजारी गरिरहेको देखिएको छ। मानिसहरू आफ्नै आफन्तहरू लाई काम दिलाउनमा व्यस्त छन र परमेश्वरले बोलाउनुभएको जन र सेवकहरूको अवहेलना गरीएको छ। एउटै परिवारका सदस्यहरू कम्पनी चर्चका कुनै न कुनै प्रकारको सेवामा समलग्न रहेर फाईदा लिईरहेको देखिन्छ। यस्ता मानिसहरू ले परमेश्वरको चर्चमा सत्यताको लोडसेडिङ ल्याउने काम गर्छन् किनभने तिनीहरू परमेश्वरबाट नियुक्त नभएर कम्पनी चर्चबाट नियुक्त भएका हुन्छन् जसले आफ्नो मात्र फाईदा खोज्छन्। चर्चबाट आफुलाई फाईदा हुनेगरी सञ्चालन गर्दा परमेश्वरको उद्धेश्यबाट बञ्चित भई मारकाट हुनु कुनै नौलो कुरा होईन। परमेश्वरको राज्यभन्दा राजनिति बढीभएको जुनै पनि संस्थामा गोलमाल मचिएको हुन्छ र मानिसहरू बरालिन्छन्। भ्रष्टचार हुनुको मुख्यकारण परमेश्वरको डरको कमी र पारथिब अभिलाशा हो।
भ्रष्टचारी चर्चको लक्षण
भ्रष्टचारी चर्चलाई रोगी चर्च पनि भन्ने चलन छ किनभने भ्रष्टचार आत्मिकी रोग हो। थोम रेनरकाअनुसार भ्रष्टचारी चर्चको १४ वटा लक्षण हुन्छन् जुन बाईबलले भने अनुसार हुबहु ठीक छ।
भ्रष्टचारी चर्चहरूले थोरैभन्दा थोरै आत्मिकी वर्दान र फल प्रयोग गर्छन। पवित्र आत्माको वरदान र अगुवाईभन्दा धन, बुद्धि, शिक्षा जस्ता माध्यमबाट सञ्चालीत हुन्छन्। आत्मिकी बरदान प्रयोग गर्न चाहनेलाई रोकिन्छ, कारवाही गरिन्छ, सताईन्छ र चर्चबाट अलबिदा गरीन्छ। पवित्र आत्माको फलभन्दा संसारीक र शारीरीक अभिलाषा राखी चर्चलाई असलको साटो खराब चरित्रले गाभीएको हुन्छ। सुसमाचार सुनाएर आत्माहरू बचाउनुभन्दा बैङको खाता बढाउने रूची हुन्छ। जवाफदेहीपनको कमी हुन्छ। सबै जना आफ्नो मनमानी गर्न आतुरी गर्छन। कुनैपनि नियमित जिम्मेवारीमा खरो भएको हुन्छ।अरूबाट असल कामको आशा गरीन्छ तर आफुबाट केही पनि हुँदैन। बडीभन्दा बढी पक्षपात ग्रसीत भएको हुन्छ जुन गरीबधनी, जातपात, अपाङ्ग,शिक्षितअशिक्षित आदिमा भरपर्छ। जहिले पनि व्यक्तिगत लक्ष र लाभ रहेकोले मुनाफा र नाफा नहुँदा हरसमय तनाब, रीसराग हुन्छन्। सदस्यहरू बीच फरकफरक कुराहरू गरी झुटो बकेर छल र भद्रगोल मचाउने काम हुन्छ। सदस्यहरू विश्वासमा बिकास हुँदै गएको देखे पछि उनीहरू लाई अल्पमत व्यवहार गरीन्छ किनमने त्यस्ता विश्वासमा बढेकाहरू तिनीहरू को लागि खतरा साबित हुन्छन जसले अरू सदस्यमाथी प्रभाव पार्न सम्भावना रहेको हुन्छ। बिभिन्न तरिकाले चापलुसीगरी स्वार्थ पुरा गर्ने सदस्यहरू लाई चलाउने काम हुन्छ। निरङकुस अगुवाहरू मा पारदर्शीताको कमी हुन्छ र धेरै जसो कामहरू खुलारू पमा नभई अन्धकारमा गरिन्छ।सदस्यहरू ले खराब निर्णय र काम प्रति अस्वीकार गर्छन भनी तिनीहरू माथी रीस गरीन्छ र सकेसम्म चर्चबाट गलत आरोप लाएर बहिस्कार गरीन्छ। आफुलाई चापलुसी गर्ने मानिसहरू ले घेरेको चहान्छन् जसले खराबै कुराहरू लाई पनि “हस, हजुर, साहेब हुन्छ” मात्र भन्न जानेका हुन्छन्। यस्ता मानिसहरू कम बोलचाल गर्छन् र अन्तरसम्बन्ध कम राख्न चहान्छन् किनभने तिनीहरू आफुमा मात्र केन्द्रित भएका हुन्छन्।
भ्रष्टचारी, कालो–सेतो धनको पर्दाफास
चर्चमा हुने भ्रष्टचारको समाचारलाई फैलाउन वेबसाइट समेत खोलीएको छ जसमध्य चर्च एण्ड सिनागग सेक्युरिटी न्युज सबैभन्दा ख्याती प्राप्त भएको छ। स्टाटस ग्लोबल मिसन २०१३ अनुसार चर्चहरू मा करीब ३७ अरब डलरको भ्रष्टचार भएको थियो। सुचना अथवा विना सुचना यस्ता रकमहरू ठगीभएको थाहा नहुने खुलासा भएको छ। अम्रिकी भन्दा पनि ठगीहरू अफ्रिकन चर्चहरू भेटिए। क्याथोलिक चर्चहरू सबभन्दा बढी भ्रष्टचारी सम्प्रादय हुन भने फोर्बस म्यागजिनले बताएको छ। क्याथेलिक चर्चको राजनिति, शिक्षा र सम्पत्तिमा लामो हात र क्षेत्र भएकोले भ्रष्टचार भएको हो। त्यस बाहेक अरू सम्प्रादयहरू ले व्यक्तिगत राजनिति, सत्ता र शक्तिको लागि गैर कानुनी तवरले भ्रष्टचार गरेको हो भनेर वाशिङटन पोष्टले लेखेको छ। २०११ सिङ्गापूरको सिटी हार्भेस्ट चर्च ५०लाख डलर ठगी गरेको बदनामी भ्रष्टचारको अभियोगमा परेको थियो।
त्यस्तै गरी हाल प्रष्पेरिटी गोस्पल(प्रशस्तताको सुसमाचार)लाई अङ्गाली बढी भन्दा बढी पैसा हिनामिना गरेको प्रत्यक्ष ठगी र चोरी कुराहरू अचेल सिएनएन, बिबिसि र अरू सञ्चारहरू मा प्रशस्त देख्न र पढन पाईन्छ। कराडौ र अरबौको मालिकहरू बनी परमेश्वरको सुसमाचारभन्दा आफ्नो सम्पत्ति बढाउने प्रबिृति रहेका यी चर्चका सेवक र कर्मचारीहरू भ्रष्टचारको बाटोतर्फ लागेकोले यिनीहरू लाई झुटा शिक्षकहरू प्नि भनिएर गाली गरिएको छ। चर्चका सम्पतिहरू बिभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गरेर अझ बढी पैसा कमाएको ब्यापारीक कामलाई पनि औँल्याईएको छ। परमेश्वरको बचनभन्दा पनि शिक्ष, समाज सेवा, अस्पताल राजनिति, प्रविधि, बिकासको काममा लगानी गरेर परमेश्वरको पैसालाई कालो धन बनाईएको दुखलाग्दो घटनाहरू जताततै देख्न सकिन्छ। व्यापारका लगानीबाट कमाएको फाईदाको कालो धनलाई सेतो धन बनाउन पनि यस्ता भ्रष्टचारीहरू ले जानेका छन्।
लाचार र विलासिताको जीवनलाई लक्ष्य बनाउनेहरू नै यस्ता लोभलाग्दो भ्रष्टचारको काममा समलग्न हुन्छन्। प्राइभेट जेट, रेल इस्टेट, टीभी कार्यक्रम, महङ्गो पहिरन, गाडी, बङ्गला, कम्पनी, खाद्यन्न, घुमफिर आदिलाई आफ्नो जीवन शैली बनाउनुनै चर्च भ्रष्टचारको जरो हो। येशू को नामलाई दुरू पयोग गरेर उपभोक्ताहरू बढाउने यी भ्रष्टचारीहरू लाई चर्चका सदस्यको भन्दा संसारीक मानिसहरू प्यारो छ। चर्चलाई संसारको अरू कुनै कम्पनीसरह हेर्ने आँखाले पनि भ्रष्टचारको कुरू प लिएको छ। संसारमा मानिसहरू ले चर्चलाई भ्रष्टचारी संस्था भनी विश्वास गरेको छ र यस्तो अभियोगले साँचो रू पले परमेश्वरको सेवा गर्ने चर्चहरू पनि लाजमा परेको छ।
चर्च भ्रष्टचार विरू द्ध अभियानहरू
संसारभरी हरेक वर्ष चर्च भ्रष्टचार विरू द्ध अभियानहरू चलाईन्छ। सन २०११मा भ्रष्टचारीहरू ले दक्षीण भारतमा बीसप इमानुएलको हत्या गरीएकोले ख्रीष्टियान भ्रष्टचार बिरू द्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। भ्रष्टचार विरू द्ध “नाथान” भनिने क्लब खोली नाथान अगमवक्ताले दाउदको भ्रष्टचारीपनलाई चुनौती दिएझै अगमवाणी सेवा मार्फत भारतमा भ्रष्टचार ख्रीष्टियान सेवकहरू लाई रोक्ने प्रयास गरीएको छ।
एक्सपोज्ड संस्थाले २०१३ मा ग्लोबल कल गठन गरेर १ ट्रिलियन डलर भ्रष्टचार भएको विरू द्ध चार दिने भ्रष्टचार बिरू द्ध आवाज उठाएको थियो। बिभिन्न देशमा चर्च भ्रष्टचार बिरू द्ध बिभिन्न समितिहरू गठन भए पनि भ्रष्टचार रोकिन सकेको छैन किनभने चर्चको भ्रष्टचारमा कानुन सामेल छैन। उदाहरणको रू पमा नेपालमा भ्रष्टचार चर्चको विरू द्ध कुनै कानुनी दायरा नभएकोले, नेपालमा भौतिकी विश्वासनियतामा लचक्ता आएको छ। बिभिन्न चर्चमा व्यक्गित तवरले समितिहरू त गठन भएका छन् तर पनि भ्रष्टचार रोक्न सकिएको छैन। बिभिन्न पदहरू को लागि तछाड र मछाड पकै पनि भईरहेकै छ।
के भ्रष्टचार रोक्न सकिन्छ ?
संसारीक तवरले भ्रष्टचार रोक्न असम्भव छ तर बाइबलीय तवरले सम्भव छ। बाईबलमा यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन। गन्ती १६ अध्यायमा मोशा बिरूद्ध कोरह, दाथान र अविराम लगायत २५० इस्राएलीहरू खडा हुँदा मोशालो भने, “मैले यिनीहरू कसैको गधा लिएको छैन र कसैलाई पिरलेको छैन।” अन्तिममा धर्ती फोटेर ती सबै भ्रष्टचारी मानिसहरू लाई निल्यो। त्यस्तै निहेम्या अध्याया १३मा महान अगुवा निहेम्याले इस्राएलीहरू बिच भएको भ्रष्टचारको कारवाही गरी भ्रष्टचारी तोबियालाई परमेश्वरको मन्दिरबाट अवकास गरी दिए। त्यागीएको परमेश्वरको घरमा फेरी दशांश ल्याउन लगाई लेवीहरू लाई भाग जुटाई दिए। परमेश्वरको अंश लेवीहरूको हो तर पापी तोबीयाको होइन भनी उनले सारा मानव जातीलाई सिकाएका छन्। उनले शबाथ दिनमा पनि भ्रष्टचार हुन दिएनन्।दशंश र भेटीहरू परमेश्वरको सन्तानको लागि हो नकि देश बिकाश लागि । राजाहरू समेत यसको दाबी गर्न सक्दैनन भनी हामी बाइबलबाट देख्न सक्छौँ। येशू ले भन्नुभयो, “जे परमेश्वरको हो परमेश्वरलाई देउ, जे कैसरको हो कैसरलाई देउ।” परमेश्वरको दशंश र भेटी कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बाइबलमा प्रष्ट गरी महान मोशाले लेखेर बुझाएका छन्। आज संसारमा बिभिन्न चर्चहरू मा परमेश्वरको आज्ञा बिरू द्ध भेटीहरू दुरू पयोग भएको छ। मलाकीको पुस्तका ३ अध्यायमा दशांश दुरू पयोग र भ्रष्ट भएकोले परमेश्वरले दुख व्यक्त गर्नुभएको छ। धन्य हुन् ती मोशा जसले यात्रा र सामान लादन कसैको गधासमेत लिएनन् र कसैलाई पिरोलेनन्।
वास्तवमा बिना कुनै कारवाही भ्रष्टचारी क्षमा हुन पर्छ भन्नेहरू भ्रममा छन। दाउद राजा एक चोटी बेथशेबाको व्यभिचारमा हिती उरियाको हत्यामा समलग्न थिए। परमेश्वरले यस्तो भ्रष्टचारको बिरोध नाथान अगमवक्तामार्फत गर्नुभयो र फलस्वरू प दाउदले व्यभिचारमार्फत जन्माएको जेठो छोरो रोगले ग्रस्त भइ मृत्यु भयो। उनकै एक छोराले अब्शालोमको बहिनीलाई बलत्कार गर्दासमेत भ्रष्टचारी दाउद परमेश्वरको बचनअनुसार मृत्यु दण्ड दिनुको साटो ती व्यभिचारी छोरोलाइ जिवीतै राखी परमेश्वरको न्यायलाई समेत बंगाएं । पछि गएर उनकै जेठो छोरो अव्शालोमले तिनको श्रीमतीहरू सँग व्यभिचार गरेर राजा दाउदको नाक काटी दिए। भ्रष्टचार गरी परमेश्वरको न्यायलाई तुच्छ बनाउँदाको परिणाम दाउदको दुखलाग्दो जीवनीबाट थाहा हुन्छ यद्यपि उनी ज्यादै असल मानिस थिए। यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको व्यक्तिले भ्रष्टचार गर्दा परमेश्वरले कडा कारवाही गर्नुहन्छ भने अरू भ्रष्टचारीहरू को के हालत होला?यस्तै उदाहरणहरू इतिहास र राजाको पुस्तकमा प्रशस्त पढन पाइन्छ। असल मानिस भए के भयो त, परमेश्वरले भ्रष्टचार गरेको भेट्टाए पछि अवश्य कान निमोठेर पक्रनुहुन्छ।
आत्मिकि लोडसेडिङ र भ्रष्टचारी चर्च Reviewed by Admin on Mar 24 . नेपालको ईतिहासमा धेरै बर्षदेखि लोडसेडिङ हुँदै आएको थिया जसको कारण कुनै पनि काम सहजरू पले हुन सकेको थिएन। नेपालमा लोडसेडिङको साँचो समस्या थिएन भनेर हामी सम्पूर्ण नेपालको ईतिहासमा धेरै बर्षदेखि लोडसेडिङ हुँदै आएको थिया जसको कारण कुनै पनि काम सहजरू पले हुन सकेको थिएन। नेपालमा लोडसेडिङको साँचो समस्या थिएन भनेर हामी सम्पूर्ण Rating: 0
महिला हिंसाविरूद्ध मण्डली पछ्याउन य...Nirnaya l Nepali Christian Movie